Ahoana ny fomba hamoronana hetsika kalandrie avy amin'ny iMessages na Mail? | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hamoronana hetsika kalandrie avy amin'ny iMessages na Mail?
Azo antoka fa efa mahalala ny maro amin'ny vaovao ao amin'ny iOS 7 ianao nanomboka teo Ao amin'ny Actualidad iPad dia mamoaka fampianarana isan-kerinandro izahay mifandraika amin'ity rafitra fiasa vaovao ity ka izay mbola tsy mahafehy azy dia mahay manao zavatra marobe. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia namoaka lahatsoratra mifandraika amin'ilay fampiharana izahay: «Fikirana»Ary fampiharana maro hafa. Ho fanampin'ny toro-hevitra sy fika isan-karazany hitazomana ny fitaovanao tsy ho eo amin'ny lesoka iOS mahazatra indrindra.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hampianatra anao aho mamorona hetsika na fotoana iray amin'ny kalandrie an'ny fitaovanao avy amin'ny mailaka Mail sy iMessages. Ohatra, ny namako Luis dia nandefa hafatra tamiko nilaza tamiko fa amin'ny sabotsy amin'ny dimy tolakandro dia mivory izahay. Rehefa ao anatin'ny fampiharana iMessages aho dia afaka manamboatra hetsika iray (miaraka amin'ny fanairana amin'ity tranga ity) ao amin'ny kalandrie amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra roa fotsiny. Te hahafantatra ve ianao? Aorian'ny fitsambikinana!
Mamorona hetsika amin'ny fitaovantsika ivelan'ny fampiharana Kalandrie
Araka ny nolazaiko anao dia hampianariko ianao hamorona hetsika avy iMessages sy mail. Haneho ny fomba fiasa amin'ny mailaka mailaka aho, fa amin'ny fampiharana iMessages azontsika atao toy izany koa mamorona hetsika amin'ny kalandrie. Maharaha vaovao:
Miditra amin'ilay rindrambaiko izay nahazoantsika ilay hafatra izahay fotoana na daty, toy ity tranga ity.
Araka ny hitanao, ny vondrona ny teny «amin'ny 5»Notsipikaina satria nanaiky ilay fitaovana fa adiny iray io. Raha tsindrio dia hiseho izay hitanao amin'ny sary etsy ambony. Mba hamoronana fanairana, kitiho ny «Mamorona hetsika".
Avy hatrany dia hiseho ity varavarankely ity izay tsy maintsy hametrahantsika ny angon-drakitra ny hetsika. Araka ny hitanao, ny iPad dia efa nahatsikaritra fa «fihaonana»Ary manomboka amin'ny«5: 00«. Rehefa vonona isika, tsindrio OK ary hataontsika noforonina ny hetsika.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hanampiana fanampiana ara-potoana amin'ny kalandrie?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fomba hamoronana hetsika kalandrie avy amin'ny iMessages na Mail?
IBiel dia hoy izy:
Azo atao ve ny mampiditra rakitra iray ohatra ny fandaharana fivoriana na raha mikasa tontolo andro iray isika, ny fandaharam-potoana ao amin'ny pdf? Ho afaka hijery izany amin'ny kalandrie?
Valiny amin'i IBiel
Farafaharatsiny tsy haiko ny fomba hanaovana azy
IbielI dia hoy izy:
Mamaly an'i IbielI
Ny niandohan'ny Touch ID: fitaovana lehibe kokoa noho ny iPhone 5s
OtterBox dia mampiseho ny tranga vaovao tsy misy rano ho an'ny iPhone 5 / 5s / 5c